Ukusetyenziswa kwesitshali esijikelezayo 1. Ekuqalekeni komsebenzi, umlimi ojikelezayo kufuneka abe kwimeko yokuphakamisa. Okokuqala, umlimi ojikelezayo kufuneka adityaniswe nes shaft yokuvelisa amandla ukunyusa isantya sokujikeleza kwesinqeni sokusika kwisantya esilinganisiweyo, emva koko isilimi esijikelezayo kufuneka sibe ...
Ukuhamba kwetrektara yesandla
Ukuhamba kwetrektara luhlobo lweetrektara ezincinci, ezithandwayo kwiidolophu zendlela yezothutho kunye noomatshini bezolimo, ngenjini yedizili njengamandla, iimpawu zayo ezincinci kwaye eziguqukayo kwaye ezinamandla zenza ukuba ithandwe kakhulu ngabalimi. amandla co lwangaphakathi ...
ngomphathi ku 21-02-07
Urhulumente uwubona ubaluleke kakhulu umsebenzi “wezolimo, iindawo zasemaphandleni kunye namafama”, ubungakanani kunye nemimandla yokunciphisa irhafu yezolimo kunye nokuxolelwa kwandisiwe, kwaye urhulumente uyawonyusa ngakumbi amandla okuthenga izixhaso zoomatshini. Oomatshini bezolimo ...
Isilimo esijikelezayo luhlobo lomatshini wokulima onokuthi ugqibezele umsebenzi wokulima nokurumba ngetrektara. Isetyenziswe ngokubanzi ngenxa yesakhono sayo esomeleleyo sokwaphula umhlaba kunye nomhlaba othe tyaba emva kokulima. Kwangelo xesha, inokuyinqumla iindiza ezingcwatyelwe ngezantsi komhlaba, c ...
Saphathwa ngombono omangalisayo wamasebe omthi athenyiweyo agaywa ngokukhawuleza ngumpheki womthi, wawaguqula aba ziingceba zeenkuni kwimizuzwana nje embalwa. Uxwebhu olungu-1 oluseMbindini luchaze umkhombandlela wophuhliso lwezolimo, iindawo ezisemaphandleni kunye namafama. Si ...
Ukuchaphazeleka kukuqhambuka kwesibini kwe-COVID-19, abantu baphesheya kwezilwandle baqale elabo "ishishini lemifuno". Umkhwa wokutyala imifuno ekhaya uvela ekuvaleni kokugqibela komzi kunye nokunqongophala kwezinto. Ngeli xesha, abantu baphesheya baphucule iindlela zabo zokukhula ...
Ibrashi yokusika ingca: umatshini osebenzela izinto ezininzi unokutshatiswa nentloko yomhlaba evulekileyo, ivili lokukhula, imela yomsele. Ingasetyenziswa ngokubanzi kwizitiya zeediliya, iidiliya, iigadi, izitiya, iziseko zemifuno, iigadi zeti, umhlaba weefama kunye nezinye iindawo. Umatshini umncinci kwaye ulula ngokobunzima. Oomama abaqhelekileyo ...
Ukubunjwa kunye nokusebenza umgaqo fogging umatshini 1. Fogging umatshini ubukhulu becala yenziwe ngamalungu amane: amanzi, isekethe, indlela oyile, indlela igesi. Ukubandakanya: i-carburetor, i-injini kunye nombhobho wokuqhuma, ipayipi yokufudumeza, ukufudumeza ubushushu, isakhelo, itanki lamafutha, ibhokisi yeyeza engamanzi, isiphatho sebhokisi, iyeza elingamanzi ...
Iivili ezine zetrekta
Iitrektara ngoomatshini abazihambelayo abazisebenzelayo ukutsala nokuqhuba oomatshini abasebenzayo ukugqibezela imisebenzi eyahlukeneyo yeselfowuni. Kananjalo unokwenza umsebenzi oqinisekileyo wokuqhutywa kwesisusa. Ngenjini, ukuhambisa, ukuhamba, ukuqhuba, ukumiswa kwe-hydraulic, ukuphuma kwamandla, izixhobo zombane, ulawulo lokuqhuba kunye netrekta ...
ngomphathi ku 20-04-27
Umlimi ojikelezayo unesakhono esomeleleyo sokusika nokuchoboza umhlaba, onokuthi ufezekise isiphumo sokutyunyuzwa komhlaba esinokufezekiswa kuphela ngamaxesha aliqela okusebenza kwekhuba jikelele kunye nokusebenza kweharrow. Ngapha koko, umphezulu tyaba kwaye ithambile emva kokuba ngamalungiselelo rotary, nto leyo ukuhlangabezana neemfuno t olunzulu ...
Ukuhamba kwetrektara luhlobo lwezothutho kunye noomatshini bezolimo abaziwayo kwiilali nasezidolophini zase China. Ubungakanani bayo obuncinci kunye nobhetyebhetye kunye namandla omeleleyo benza ukuba kuthandwe kakhulu ngabalimi. Ijika kwi-clutch ikakhulu ngokuxhomekeke kwindawo yokubamba yasekhohlo nasekunene, eyahlukileyo kwi ...
Umatshini wokudreyiza ngumjelo, umhlaba, ukuchumisa, ukudibanisa ukubuyisela umatshini omncinci wezolimo, kwitrektara encinci yamavili amane yamandla, umatshini wokurhoxisa amanqaku amathathu, umatshini wokutshixa idiskhi kabini. Umsele wamanzi malunga ne-35 cm. Shichao umsele ...